Sida lagu Helo Album farshaxanka u Lugood
> Resource > Lugood > Sida lagu Helo Album farshaxanka u Lugood Library in Dufcaddii
Waxaa laga yaabaa in aad baabuur waddo waalan haddii aad leedahay a Lugood maktabad weyn oo ah in gebi ahaanba waa in daadsanaanta macluumaad sida farshaxanka album ama macluumaad aan sax ahayn maqan. In aad maktabadda si fiican Lugood, waxaad u baahan tahay in aad ku darto macluumaad dhamaystiran heesaha oo dhan. Halkan waa hab macquul ah si aad u hesho farshaxanka album u maktabadda Lugood iyo sidoo kale macluumaad kale sida artist, horyaalka iyo xitaa lyircs. Waxa aad u baahan yahay tool-- a smart Wondershare TidyMyMusic u Mac . Waxaa rakib on your computer ka dibna noo raaco si aad u hubiso sida aad u heli farshaxanka album u Lugood hoos ku qoran.
1 dar maktabadda Lugood aad
Burcad TidyMyMusic ka dib markii lagu rakibay. Markaas maktabadda Lugood aad ah loo baadho doonaa oo ku daray in ay barnaamijka si toos ah. Oo wakhtigii soo socda aad furto barnaamijka, waxan u samayn doonaa iskaanka mar kale ay dhacdo in aad ku daray heeso cusub oo maktabadda Lugood aad.
2 Sawirka maktabadda oo dhan iyo u hesho farshaxanka album
Riix badhanka Scan in madax iyo sax checkbox ee "Raadi Songs Allaha". Markaas barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli gabayadii aan la aqoonsan oo iyaga aqoonsado jidka. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, dhammaan macluumaadka waxaa laga heli karaa, oo ay ka mid tahay album, faahfaahinta track, lyrics iyo in ka badan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sax ku checkbox ee "Raadi labalaabka Songs" oo guji badhanka Scan, barnaamijkan ka heli kartaa heeso labalaabka maktabadda Lugood iyo waxa ay si aad u go'aansato mid ka mid ah in ay tirtirto ama aad iyaga dhan hayn karo.
3 Embed farshaxanka album in song kasta
Ka dib markii ay dhamaan macluumaadka la ogaaday, oo ay ka mid tahay albumka, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah hees iyo hubiyo macluumaadka ku jira khaanadda saxda ah. Markaas riix badhanka Codso on xaq u hooseysa in Cudarada macluumaadka heesta. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso oo isku xigta iyo codsan waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: TidyMyMusic ku siinayaa xorriyad buuxda oo uu ka xaalkaa macluumaadka iskaa haddii aadan ku qanacsanayn waxa ka soo helay. Riix gabay iyo wax miiran icon Edit ku khaanadda saxda ah. Markaas waxaad soo jiidi kartaa image kasta oo goobta album tahay ama ku buuxi macluumaadka kasta oo beerta ku tafatir ah.
Waa sidan sidii aad u heli karaa farshaxanka album u maktabadda Lugood aad. Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad kala soo bixi hal oo u dhiiba go a. Markaasay aad u xallin karnaa oo si wanaagsan u maareeyaan maktabadda Lugood aad oo gargaar ka tahay albumka.